के गर्ने तौल घटाउन ? | सुदुरपश्चिम खबर
के गर्ने तौल घटाउन ?
पछिल्लो समय उमेरको अनुपातमा धेरै तौल अर्थात मोटोपन भएका मानिसहरुको संख्या बढ्दो छ ।
–शारीरिक व्यायाममा ध्यान दिनुपर्छ । रातोपाटी बाट सभार
क्याप्चा हल गर्नुहोस् * 89 + = 93